Ahụ Igwe Igwe Igwe Na-eji Na Ahụike Nlekọta - OMG Solutions
Ejiri igwefoto Ekwo Isi na Ihe Nlekọta Ahụike
Igwefoto ahụ mebere ya bụ ngwa ọgbara ọhụrụ nwere ihe ọdịyo na ọnụnụ vidiyo na-enye mmadụ ọrụ idekọ ihe ha hụrụ ma nụ. Onye uwe ojii ma ọ bụ dọkịta ma ọ bụ onye na-ahụ maka ahụike nwere ike itinye aka na akụkụ dị iche iche nke ahụ, gụnyere isi, okpu agha, iko, ma ọ bụ n’akpa ahụ, baajị ma ọ bụ ụzọ mgbakwunye ndị ọzọ dị ka n’ime ụgbọ ala na n’elu. Ha nwere ike dee ọrụ onye na-eme kamera ahụ. Na mbu, naanị igwefoto ụgbọ ala ma ọ bụ gbaa ajụjụ ọnụ na-ejide ihe niile.
Ojiji eji igwefoto ndi ahu n’ahu na-abawanye ubochi? Ee n’ihi na o belatara ọtụtụ ihe omimi na nyocha nke mpụ dị iche iche. Igwefoto ndị ahụ na-eyi bụ ịgba akaebe na esemokwu na mpụ. O meela ka ọtụtụ obi abụọ banyere nghọtahie. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu nwere ike ịghọta ikike ịdekọ vidiyo iji nyere aka na mpụ na-esetịpụ ihe, ịkwalite ngosipụta, na ọkachamara. Ihe ọghọm dị ka ogbugbu Michael Brown n'obodo Ferguson, USA na-eme ka abawanye na ojiji igwefoto eyi. MS amụbawanyela iji igwefoto ahụ na-eyi maka nchekwa megide onye ọrụ na onye merụrụ ahụ.
Ugbu a ajụjụ na-ebilite, kedụ ikike na ọghọm dị na igwefoto ahụ na-eyi? Igwefoto ndị na-eyi n’ahụ nwere ọtụtụ uru na uru. Anyị ga-ewetara nyocha ebe a. Mahadum nke Cambridge, Mahadum nke ime ihe ojoo na United Kingdom weputara akwukwo nyocha banyere uru ndi aru Worn Cameras di. O gosiputara mbelata nke iri ise. Nkwupụta a ekwuola na ọ bụghị naanị na anyị ahụla ka mbelata ojiji nke ike mana kamakwa mkpesa ndị uwe ojii na-ebelata belata pasent iri itolu.
Uru ndị ọzọ nke iji kamera na-eyi uwe na-egbochi ọnọdụ esemokwu, idozi mkpesa ndị uwe ojii, idozi na ịchọpụta nsogbu njikọta n'ime ụlọ ọrụ gị, melite nghọta nke ụlọ ọrụ, na melite akwụkwọ ihe akaebe. Igwefoto ahụ na-eyi na-enyere onye uwe ojii ahụ aka ịbụ ọkachamara mgbe ọ nọ ọrụ.
Mgbe anyi kpughere igwefoto ahụ mebere ya ma kọwaa uru ọ bara, anyị na-aga isi okwu anyị. Igwefoto ahụ na-eyi na-enyere aka belata ime ihe ike n’ebe ụlọ ọrụ ahụ ike. Gọọmentị nke United Kingdom mejupụtara n'ụlọ ọgwụ ndị ọrụ nchekwa ga-eyi kamera ahụ. N ’ụlọ ọgwụ Queen Elizabeth dị na Birmingham, Ndị ọrụ nchekwa England na-eyi kamera ahụ RS2 / RS3. Ọmụmụ ihe ahụ nọrọ ọnwa atọ n'ụlọ ọgwụ. Ndị ọrụ nchekwa ụlọ ọgwụ a nwere ike dekọba ihe ọ bụla ma ọ bụ iyi egwu nke mkparị na mmekpa ahụ, egwu ma ọ bụ omume enweghị ezi ma ọ bụ mmeso olu na agbụrụ. Enwere ọtụtụ ihe mere n'ime oge a nke igwefoto ahụ nyeere aka na okwu dị iche iche. Otu nwanyị ọrịa adịghị njikere ịhapụ ngalaba ihe mberede ma siri ọnwụ na ọgwụ ndenye ọgwụ. Nwanyị nwanyị ahụ boro ndị ọrụ ụlọ ọgwụ ebubo na ha na-emetụ ya aka n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Ka ọ dị ugbu a, onye ọrụ nchekwa ụlọ ọgwụ gwara ya na igwefoto ya na-edekọ ya ma ị na-eche nche. Nnyocha a bụ nnukwu ihe ịga nke ọma.
Ihe atụ ọzọ banyere iji igwefoto ndị mmadụ na-eyi bụ nke National Health Service Foundation Trust na United Kingdom. Ndị ọrụ nchekwa ebe ahụ ga-aza onye ọrịa ahụ na ha nọ n'okpuru onyoonyo ma ọ bụrụ na ha emeghị ihe ọjọọ. Ọbụghị naanị kamera ndị meburu n’ahụ belata ime ihe ike kamakwa igwefoto chọtara ntụpọ nke ngwaọrụ ndị ọzọ anaghị enwe ike ime. Igwefoto ahụ na-eme ka ọ dịkwa mma ịchọpụta ndị ọrụ na-arịọ maka ịbanye n'ụlọ ọgwụ. Hospitallọ Ọgwụ Cardiff dị na Wales anakwala na-erite uru nke igwefoto ahụ eyi. Ndị ọrụ nchekwa ụlọ ọgwụ na-agbanye igwefoto ka ha na-eche ọnọdụ ike.
N’ụlọ ọgwụ Mahadum Wales, onye na-ahụ maka ndị ọrụ nchekwa dọrọ onye ahụ na-anwa ike iwe iwe na ọ nọ na nche nke igwefoto ahụ na-eyi. Ihe ngosi nke eserese igwe eji eyi n’elu igwe bụ nnukwu ihe akaebe nke mkpagbu ndị omempụ. Omume ndị a emeela ka ọnụego ihe ike dara.
Enwere ikike ụfọdụ iji igwefoto ahụ na-eyi eme. Nke mbu, igwefoto ahu n’enwe agha adighi achu onye uwe ojii anya ka ihe merenụ na-eme n’ihu ya. Ihe mgbochi ọzọ igwefoto ahụ yi bụ ozu onye uwe ojii na-egbochi ikiri ebe ahụ. Igwefoto ahụ na-eyi enweghị ike ịnwe elele ogo 360 nke ọnọdụ nwere ike ịdakwasị ya. Ọ bụ ihe isi ike ọzọ na mgbe igwefoto ahụ mere ka ịgbanwuo. Enwere ọtụtụ ihe mere mgbe ndị uwe ojii enweghị kamera ha mgbe ihe ahụ na-ekwesịghị ekwesị. Igwefoto enweghị ike dochie anya usoro eji arụ ọrụ. Oge a na-egbochi igwefoto ahụ na-eyi ezughị ezu ma ọ dị mkpa maka ndozi. Thedị arụmọrụ igwefoto nwekwara ikike maka ndozi.
United States of America Office of Justice Program na Bureaulọ Ọrụ Ikpe Ziri Ezi ewepụtala ngwa ọrụ ntanetị. Ngwá ọrụ a na-enyere ụlọ ọrụ dị iche iche aka ịzụ ụzọ ha ga-esi jiri kamera mmadụ na-eyi. Uzo di iche-iche n’ime ulo oru choro uzo di iche iche maka nkuzi ya ma enye ya na ntaneti a. Ndị prọfesọ nke criminology Charles Katz na Michael White mepụtara ngwa ọrụ ntanetị a.
Okwesiri ileba anya n’ulo ahuike iji kamera eyi? Teknụzụ igwefoto ahụ na-eyi na gburugburu ụlọ ọgwụ bụ nnukwu nchegbu banyere atụmanya nzuzo nke ndị ọrịa na ndị nleta nyere ọnọdụ nchịkwa na ọnọdụ iwu ahụike gburugburu ebe obibi ahụike chọrọ. E nwere ọtụtụ iwu siri ike na-achịkwa iji na wepụta ozi gbasara ndị ọrịa ahụike akparamagwa, ọtụtụ n'ime ha na-amalite nlekọta ha na ngalaba mberede ụlọ ọgwụ, ebe niile maka ndị ọrụ mmanye iwu.
N'ime ngalaba ihe mberede, ekwesịrị inwe igwefoto eyi. N’otu aka ahụ, enwere ụfọdụ ndị emetụtara na ajụjụ ịgba akaebe nke ndị ọrụ mmanye iwu na-eme n’ụlọ ọgwụ dịka mwakpo nwoke na nwanyị, mmetọ ụmụaka, na ikpe ime ihe ike n’ụlọ ga-eme ka esemokwu dị na iwu dị adị n'ihi ọnọdụ nke ajụjụ ọnụ ahụ na mmekọrịta nke isiokwu ahụ. ya na onye na ahu ike.
Site na ịhazi ndị otu dị iche iche, gụnyere ndị uwe ojii obodo, njikwa ihe ize ndụ, ọrụ iwu, yana ndị ọrụ nchekwa ahụike nwere ike ime nyocha ma nwekwa ike iwepụta ọtụtụ nsogbu ndị a na-atụ anya ịbanye na iji teknụzụ dị otú a na ogige ha.
N'ebe a, anyị na-atụ aro iji igwefoto-Worn Camera iji nweta ahụike Ahụike. Igwefoto a na-eyi n'ime ahụ nwere ike ime ka ọrụ ndị ọrụ ahụ ike dịkwuo mma. Ndị dọkịta, ndị dọkịta na-awa ahụ, na ndị ọrụ ahụike nwekwara ike iji kamera nwere ahụ mmadụ. Omume a bara uru na ịmekwu nyocha na sayensị ọgwụ. N'oge ọrụ ịwa ahụ, ọ bụrụ na ndị dọkịta na ndị na-ahụ maka ahụike na-eji igwefoto eyi uwe, ụmụ akwụkwọ ahụike nwere ike inweta enyemaka site na nke a.
Anyị na-enye naanị otu atụ ịwa ahụ na Hospitallọ Ọgwụ ndị soja Rawalpindi, Pakistan. N'ime ụlọ ọgwụ ndị agha Rawalpindi, Pakistan n'oge ọrụ ịwa ahụ nke akụrụ nwanyị na-arịa ọrịa, dọkịta na-awa ahụ hapụrụ ọrụ ịwa ahụ n'ime ahụ. Ihe a mere ọnwụ nke onye ọrịa ahụ. Ọ bụrụ na dọkịta na-awa ahụ ejirila igwe na-eme ahụ mgbe ọ na-awa ahụ, igwefoto ahụ yi ahụ ga-edekọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ihe enyemaka dị ukwuu iji zere ihe ndị na - enweghị isi n'oge ịwa ahụ.
Ugbu a, anyị na-atụle Health Insurance Portability na Akaụntụ Iwu na United States of America. Iwu a bụ ụkpụrụ maka nchekwa nke ụfọdụ ozi ahụike na United States of America. Iwu ahụ nwere ọtụtụ ihe achọrọ maka onye nwere ikike ilele ozi ahụike onwe onye yana onye ga-enweta ozi a. Ọ na-ahụ maka ojiji na ngosipụta nke ozi mmadụ. Omume ahụ na-ekwukwa banyere ikike nzuzo mmadụ na otu ndị ọrụ mmanye iwu na ndị ọrụ Ahụike nwere ike isi jiri ozi a. Iwu nzuzo nke HIPAA na - emepụtakwa mgbe ọ bụla ọ bụla dịịrị ndị omekome na - anabata ozi gbasara ahụike.
Ihe omuma ahu nke aru Worn Cameras nara, ndi otu di n’okpuru Iwu ebumnuche ndi nwere ike kpughere ọnọdụ ise.
Ọ bụrụ na Iwu chọrọ ozi a n'okpuru iwu ụlọikpe, ikike ma ọ bụ nchịkwa.
Iji mata onye na-enyo enyo, onye hapụrụ, gbaa akaebe, ma ọ bụ onye na-efu efu.
Na nzaghachi nye ndị ọrụ nchekwa iwu maka ozi gbasara onye omekome ma ọ bụ onye a na-enyo enyo na ọ dara.
Mgbe otu nzukọ kwenyere na ihe omuma ahụike a bụ ihe akaebe nke arụ nke mere na gburugburu.
Site na onye na-eweta nlekọta ahụike kpuchitere na ọnọdụ ahụike mberede anaghị eme na ogige ahụ mgbe ọ dị mkpa ịgwa ndị mmanye iwu banyere ọrụ na mpụ, ọnọdụ ma ọ bụ mpụ ma ọ bụ ndị omekome ahụ, na onye na-eme mpụ ahụ.
Yiri Iwu Nzuzo HIPAA nke United States, Iwu Nchedo United Kingdom na Iwu nzuzo nke Australia anaghị agwa mmadụ iji vidiyo na iji igwefoto ahụ eme ihe bụ nke a. Ọ nweghị iwu na-ekwu na ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị iji igwefoto ahụ mmadụ n'ụlọ ọgwụ. N'okpuru usoro ikpe na nchịkwa, iwu ahụ kwuru na ụlọ ọrụ kpuchitere nwere ike igosipụta ozi ahụike echedoro na usoro ikpe ma ọ bụ nchịkwa ma ọ bụrụ na arịrịọ maka ozi sitere n'usoro ụlọ ikpe ma ọ bụ nke nchịkwa. Ọ pụtara na Iwu nwere ike igosipụta ozi ahụike echedoro maka ebumnuche ikpe.
Na nkenke, nyocha anyị na-egosi na iji igwefoto eyi n’ahu na-aba uru nke ukwuu na Ihe Nlekọta Ahụike.
Nzuzo 6066 2 Echiche Taa